Sidee u shaqeeyaa PIR Sensor iyo waa maxay faa'iidooyinka?
Sidee u shaqeeyaa PIR Sensor iyo waa maxay faa'iidooyinka? Kaalay oo arag!
Mabda'a shaqada ee dareenka dhaqdhaqaaqa PIR
Dareemaha kicinta jidhka bini'aadamka waxaa sidoo kale loo yaqaan 'pyrolysis induction switch' ama beddelka garaadka infrared. Curiyaha induction infrared waa walxo pyroelectric ah. Marka xoogga shucaaca infrared-ka ee uu ka helo jidhka bini'aadamku isbeddelo, wuxuu lumiyaa dheelitirka kharashka oo wuxuu bilaabaa inuu sii daayo hadda.
Marka qofku galo qiyaasta dareenka, dareemaha gaarka ah ayaa ogaanaya isbeddelka infrared spectrum ee jidhka bini'aadamka oo si toos ah u shid culeyska. Dadku kama tagaan xadka dareenka, way sii wadi doontaa isku xidhka. Kadib marka qofku baxo, daahitaanku si toos ah ayuu u damiyaa culayska.
Daboolida jidhka bini'aadamka ayaa inta badan lagu isticmaalaa meelo badan oo dadwayne ah oo ay ku nool yihiin sida jaranjarooyinka, meelaha la maro, musqulaha, wiishashka, iwm.
Faa'iidooyinka kontoroolka iftiinka waddada qorraxda ee leh dareenka dhaqdhaqaaqa PIR
1. PIR jidhka bini'aadamka induction nalalka cadceeddu waa kuwo jawaab celin leh, tamar-badbaadiya iyo deegaan ahaan saaxiibtinimo. Habeenku markuu dhaco, iftiinku wuu yareeyaa oo si toos ah ayuu u shidmaa marka uu ogaado in qof uu ku dhex socdo xadka dareenka. Haddii qofku sii wado inuu u dhaqaaqo inta u dhaxaysa, iftiinka dareemaha jidhka bini'aadamka ee LED mar walba wuu shidan doonaa. Marka jidhka bini'aadamku ka baxo ama joojiyo dhaqdhaqaaqa, wuu dami doonaa dib u dhac ka dib. Looma baahna beddelka gacanta habkan, kaas oo ah mid deegaan ahaan u wanaagsan oo aan buuq lahayn. Isagu ma sii daayo nooc kasta oo shucaac laftiisa ah oo aad bay u wanaagsan tahay deegaanka.
2. PIR jidhka bini'aadamka induction nalalka qorraxda ayaa aad waxtar u leh iyo tamar-badbaadinta, oo leh nolol dheer iyo waxqabad xasilloon. Sababtoo ah laambadheedu si toos ah ayay u dami doonaan ka dib marka dadku baxaan, waxay noqon kartaa mid tamar badan leh. Isticmaalka korantada ee qalabku waa mid aad u yar oo nolosha adeegga ayaa dheer.